/ 21:58 /
Youtube video တွေကို direct download link ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Application တွေ web တွေနဲ့ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် လင့် တစ်ခု တည်ဆောက် ရတာ ဆိုတော့ အနည်းငယ် စိတ်ရှုတ်စရာ ကောင်းပြီး အခြား အထောက်အပံ့ တစ်ခုခု သုံးတာ ပို အဆင်ပြေ တယ် ထင်မှာပါ။ သို့ပေမယ့် နည်းလမ်း တစ်ခုဟာ အခြား တစ်နေရာမှာ တွဲစပ် သုံးနိုင်ခြင်း တွေလဲ ရှိနေပါတယ်။
YouTube website ကိုဝင်ပြီး ဒေါင်းလုဒ် လုပ်လိုသော ဗီဒီယို ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ဗီဒီယိုဘေးနား လွတ်နေတဲ့ တစ်နေရာမှာ right click နှိပ်ပြီး view source ကို ရွေးပေးပါ။
ထပ်မံပေါ်လာတဲ့ source of windows မှာ ctrl+f နဲ့ " watch_fullscreen? " ကို ရှာလိုက်ပါမယ်။ အဲဒီနောက်က ကုဒ်တွေကို title ထိ ကူးပြီး ပေါင်းထည့်ပေးပါမယ်။
" http://www.youtube.com/watch?v=E1eHXDbnX7g " ကို ဥပမာ အနေနဲ့ ပေါင်းထည့်ကြည့်ပါမယ်။
http://www.youtube.com/get_video? + COPIED string ဖြစ်တဲ့အတွက် http://www.youtube.com/get_video?fs=1&vq=None&video_id=E1eHXDbnX7g&l=23&sk=6jpIzfIC6K0xkJ0IGDBHIGNWOu7dwSKSU&fmt_map=&t=OEgsToPDskJuAVPtAmGI7x_UqDPnTL4P&hl=en&plid=AARTzSk7kku7FuW9AAACgAAQAAA&title=stricker'; လင့်ကို ရရှိပါတယ်။ High Quality video လိုချင်ရင်တော့ &fmt=18 ကို title နောက်က ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Update ။ ။ " http://www.youtube.com/watch?v=E1eHXDbnX7g " ဒီလိပ်စာက လိုချင်တဲ့ ဗီဒီယိုအတွက် url bar က copy လုပ်ခဲ့ရပြီး အစိမ်းရောင် watch? နေရာ get_video? အစားထိုးတာက ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အပြာရောင် v=E1eHXDbnX7g နေရာ fs=1&vq=None&video_id=E1eHXDbnX7g&l=23&sk=6jpIzfIC6K0xkJ0IGDBHIGNWOu7dwSKSU&fmt_map=&t=OEgsToPDskJuAVPtAmGI7x_UqDPnTL4P&hl=en&plid=AARTzSk7kku7FuW9AAACgAAQAAA&title=stricker'; ကို အစားထိုး တာက COPIED string လုပ်လိုက်တာပါဘဲ။ ကူးရတဲ့ string code ကို ပုံ (၃) မှာ အနီရောင် ဘောင်ခာတ်ပြထားပါတယ်။ ပုံများ ကို click နှိပ်ပြီး ပုံကြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်နည်းနည်း ၀င်လျှာရှည်လိုက်ဦးမယ် ယူကျူ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် အဲဒီလောက် မလိုဘူးဗျ youtube ဆိုတဲ့ စာသားမှာ voobys
လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ ဥပမာ http://www.youtube.com/watch?v=uR_PzFZgsHU ကို ဒေါင်းလုပ်ချင်ချင်ရင် http://www.voobys.com/watch?v=uR_PzFZgsHU လို့ထည့်လိုက်ရင် ဒေါင်းလုပ်လို့ ပေါ်လာလိမ့်မယ် စမ်းကြည့်ပါဦး ပျော်ရွှင်ပါစေ
အဟား လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေး ပါဘဲ။ ရှယ်ပေး တာ ကျေးဇူးပါ။
Still auto reboot the Blue Screen
Product and Licenes Key Recover
Read free online magazines
Change desktop icons with mouse wheel
Rss translate with Mloovi
Fake vista performance score
Read 70 free magazine with firefox
Read Multiple GMails
Request blocked webpages to your email